ရှမ်းလမ်းဂွဈေးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ ည၁နာရီကျော်ခန့်က | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရှမ်းလမ်းဂွဈေးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ ည၁နာရီကျော်ခန့်က
Posted by chityimhtoo on May 18, 2012 in News | 31 comments
CJ ကြီး ချစ်ရင်ထူး ကိုချီးကျူးပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ မနေ့ညနေကတည်းက မိုးရွာနေတာ။
ပူလွန်းလို့ ထ လောင် တာ မဟုတ်ပါ။
အခြောက်အခြမ်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ ပါသွားတယ်လို့ ကြားတယ်။
သားငါး အခြမ်းပဲ ကျန်တယ် ဆိုလား.. အဲဒိ နားမှာ နေတဲ့ လူတွေ ဆီက ကြားတယ်။
ဒီလိုစီဂျေတွေနဲ့တိုင်းပြည်… နောက်ဆို.. အစိုးရလှုပ်ရဲမှာတောင်မဟုတ်ဖူး..
အဲဒီလို မြန်ဆန်မှုတွေကြောင့် မန်းဂေဇက်တန်ဖိုးတွေ တက်လာတာ။
ဘရာဗို ပါ စီဂျေကြီး။
(စီဂျေကဒ်ပေးရင် ချစ်ရင်ထူး နံပါတ် ၁ ရမယ်။)
ဂွဈေးမီးလောင်မှု မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံများ (ဓါတ်ပုံ-Myanmar News Now) ဓါတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယို – ကိုဖြိုး ရိုက်ကူးပေးပို့ ထားတာပါ။
ဒါနဲ့ ……….. chityimhtoo နဲ့ကိုဖြိုးက တစ်ယောက်ထဲပဲလား
ဈေးဘေးနားက အိမ်တချုိ့ပါ မီးလောင်တဲ့ ထဲပါသွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်…..
ဈေးတွေချည်း တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး အကြောင်းပြချက်နဲ့ .. မီးလောင်နေတာ … သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် သံသယ၀င်မိပါတယ် ။ ဒီ၁နှစ် ၂နှစ်အတွင်းမှာ မီးတွေလောင်လိုက်တာ … ဈေးတွေချည်းကြားရတာ များတယ် … ။ အဲ့ဒီဂွဈေးကို အဆင့်မြင့်ဆောက်မှာမို့ ဖျက်ခိုင်းနေတာ ၊ ဖယ်ခိုင်းနေတာ ကြာပြီလို့လည်း သိရတယ် ။ ဈေးသည်တွေကလည်း မဖယ်ပေးပဲ ဆက်ရောင်းရင်း ဒီလိုဖြစ်တာလို့လည်း သိရတယ် … ( ကာယကံရှင်မဟုတ်လို့ … ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိဘူး .. ကြားရတာကို ပြန်ပြောတာပါ ) … ။ တကယ်ဆိုလျှင် စာနာစိတ်လေးတော့ ထားပေါ့နော် ။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားပြီး မရှက်မကြောက်ဈေးရောင်းစားရတာပါ …. ။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးဆိုင်ခန်းခ ရင်းထားရတာမျိုးပါ ။ သမရိုးကျ မီးလောင်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ပယောဂကြောင့်ဆိုလျှင်တော့ … အလွန်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ် ။ ကာလရှည်စွာ စုမိစောင်းမိတာလေးအရင်းပြုပြီး ဈေးရောင်းစား ၊ အခုလို ဆိုင်ခန်းမီးထဲပါတော့ … ဈေးရောင်းမှ ရမယ့် ပိုက်ဆံကို မှီတွယ်နေသူ မိသားစု … ဘာနဲ့ ထမင်းသွားစားရတော့မလဲနော် … ။
စိတ်ဓါတ်တွေ .. စိတ်ဓါတ်တွေ … ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်နေပြီ ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်က လိပ်ပြာသန့်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ကောင်းနေပြီ ။ ဈေးတွေမီးလောင်တိုင်း ဆိုင်ခန်းတွေ မနည်းမနောပါသွားတယ် … ။ တစ်ခုခုဆို အကြောင်းရင်းမှန် စုံစမ်းလို့ ရလားမရလားမသိဘူး … နာမည်တပ်တာကတော့ ၀ါယာရှော့ပေါ့နော် … ။ မီးက ပျက်လိုက် လာလိုက် ၊ မိုးကရွာလိုက်နဲ့ဆိုတော့ … ဆွေးမြေ့နေတဲ့ ၀ါယာကြိုးတွေ ရှော့ဖြစ်တာ သုံးစွဲသူ မီးပေါ့ဆလို့ အပြစ်ရှိသတဲ့လား … ။ ဟိုးတလောက ပုစွန်ထောင်က … ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အုံတစ်ခု ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပါတယ် … ။ အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ … အရေးမယူပဲ … အသုံးပြုတဲ့ ထရန်စဖော်မာတွေ ၊ မီးကြိုးတွေ အနှစ်သုံးဆယ်လောက် ရှိပြီမို့ .. ကြာလွန်းလို့ ဖြစ်တာပါတဲ့ … ။ အိမ်တွေ၊ဆိုင်တွေက မီးကြိုးတွေပေါက်ပြဲလို့ ..၀ါယာရှော့ဖြစ်လျှင် .. အနှစ်သုံးဆယ်လောက်မို့ .. ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီမို့ ဆိုပြီး အကြောင်းပြချက်ယူပြီး အရေးယူခံရမှု ရှောင်လွဲလို့ ရမလား … ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပြောပါတယ် ….. ။ ကိုယ့်အသားဆိတ်တော့ နာတတ်လိုက်တာ … ။ ကျက်သရေတုံးတယ် … ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ..အသံလေးဗျာ…ကျက်သရေကို တုံးပါတယ်ဗျာ..အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ သူတွေကိုပြောတာပါ..
သေရင် ချက်ချင်းမသေဘဲ ဆန့် ငင် ဆန့် ငင် နဲ့ သေ နိုင်ပါစေဗျာ..
အကောင်းမြင်သမား – အို တို့တတွေ ဈေး အသစ်ကြီး ရတာပေါ့
အဆိုးမြင်သမား – ဘာမှ မရှိတော့ဘူး ..တခုမှ မရှိတော့ဘူး …
ဘာသာရေးသမား – အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ
ကွန်ဇာဗေးတစ်ဗ် – သည်လောက် သက်တမ်းရှိတဲ့ ဒို့ ရိုးရာ အမွေ အနှစ်ကွယ်…
လစ်ဗရယ်လ် – ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် တခုခု အဆိုတင်သွင်းမှ
ကွန်မြူနစ် – အဟတ်.. အနည်းဆုံးတော့ ထမင်းအိုးချင်း တန်းညှိပြီးသား ဖြစ်သွားသပေါ့
ဆိုရှယ်လစ် – နိုင်ငံပိုင် ပြန်ဆောက်ပြီး အခန်းတွေ ငှားစားမယ်
ခရိုနီ – လေလံ ကြမ်းခင်းဈေး ဘယ်လောက်ရှိလည်း သိချင်ထှာ..
အင်န်ဂျီအို – ကူညီဗျဇေ ကူညီဗျဇေဗျ…
ကာယကံရှင်များ – နှမျောတသ ၃ကြိမ်ရွတ်ဆိုရင်း အမြင်အာရုံများေ၀၀ါးလာ …ထှောက်ခ် …
ရပ်ကွက်နေသူများ – တော်သေးတယ် ..ဂလောက်နဲ့ပြီးတာ
စာဖတ်သူများ – သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လား…
မောင်ဂိ့ – ဈေးတွေ မီးလောင်တယ်ဆိုတာ သတင်း လို့ကို မမှတ်တော့ပါဘူးဗျာ …အဟိ ..
ညက အိမ်ကို ၁နာရီကျော်လောက်က ဖုန်းလာသံကြားတယ် နောက်တော့ တစ်အိမ်သားလုံး ဆူဆူညံညံတွေ
ဖြစ်ကုန်ပါရော ။ဘာလို့ဆို အဲဒီဈေးမှာ အိမ်က ဆိုင်ဖွင့်ထားတာကိုး အဲဒါနဲ့ ကြားကြားချင်းကို သွားကြတာပါပဲ
ဖုန်းတွေဆက်လိုက်တာလဲ အားရစရာပါပဲ တစ်ဈေးလုံးကုန်ပြီတဲ့ဗျာ ဖြစ်ချင်တော့ မနေ့ကမှ ကုန်ဖိုးငွေတွေ ဆုထားပြီး ရှိသမျှ ပိုက်ဆံနဲ့ ဈေးတွေဝယ်ထားလိုက်မိတယ်ဗျာ…….အကုန်ဆုံးပါလေရော
မအိတုံပြောသလိုပဲ အဲဈေးကို ဖယ်ခိုင်းနေတာ ကြာပါပြီ ………ဈေးက လူတွေက ညီတယ် မဖယ်ပေးနိုင်ဘူး
လို့ဆိုပြီး ၀ိုင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာလေ …စနစ်တွေပြောင်းပြီထင်ပြီး အိမ်ကလူတွေလဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာ
အခုတော့ ကြိုးစားထားသမျှ အရင်းတွေရော ရထားတာလေးတွေကော ကုန်ပြီ
ပြီးတော့ ဒါသက်သက်ကို လုပ်မီးဖြစ်နိုင်တယ် ပြောရင်းနဲ့တောင် ဒေါသတွေထွက်ရပါတယ် တစ်ညလုံးလဲ စိတ်တွေစဉ်းရဲ အမေတို့ အဒေါ်တို့ ဆိုပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာ …………..
ကျွန်တော့်မိသားစုတော့ ရှေ့လျှောက် ခက်ပြီပေါ့ဗျာ
Onyx ရေ … ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးနော် ။ကိုယ်ချင်းလည်းစာမိပြီး … ထပ်တူကြေကွဲသလို ခံစားမိပါတယ် ။ တရားနဲ့ ဖြေပါလို့တောင် … မနှစ်သိမ့်ရက်ပါဘူး ။ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူး ၊ ကိုယ်သေလျှင် ဘာပစ္စည်းမှ သယ်သွားလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့အသိလေးကပ်ထားဖို့သာ .. အကြံပြုပါရစေနော် ။
ကျေးဇူးပါမအိတုံ ရေ ဘာတွေဘယ်လို လုပ်ပေးမယ် ဘာကိုအကြောင်းပြချင်ပေးမယ်ဆိုတာ ကိုစောင့်ကြည့်ရအုန်းမှာ ပဲ အခုတော့ ဈေးမှာ ပစ္စည်းတွေ ကျန်လို ကျန်ညား ရလိုရညား သွားလိုက်အုန်းမယ်
သတင်းရရင်လဲ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် ။နောက်ဆို ဈေးဖယ်ခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့ အသာတကြည် ဖယ်ပေးဖို့သာ ပြင်ကြပေတော့…မဟုတ်လို့ကတော့ တရားမဲ့ လူတန်းစားက ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဗျို့
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
အဲဒီ ဂွဈေးကိုဖယ်ခိုင်းနေတာကြာပြီလို့တော့ ကြားတာဘဲဗျ ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်…
ဈေးမီးကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိသားစု အားလုံးနဲ့ ထပ်တူ ထပ်မျှ ၀မ်းနည်း မိပါတယ်။
ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ခန်း အလိုက် အလျှော်ရဖို့ သင့်တယ်နော်။
ဈေးဆောက်ပြီးရင် ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ ကိစ္စ လာအုန်းမယ်။
သံတွဲ ဈေး တုန်းက ကြားသလိုမျိုး.. ရန်ကုန် မြို့မှာ ဆိုတော့.. ဒီထက် ပိုပြီး ကြားရမယ် ထင်ပါ့။
ပုံကြည့်ရတာ တော်တော်များတဲ့ပုံပဲနော်… ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ မီးကတော့ ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှာ တစ်ပါးအပါအ၀င်ပါပဲ။လူတွေ ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခရောက်လိုက်ကြမလဲ။ လူတစ်ယောက်ပေါ့ဆမှုကြောင့် အများထိခိုက်နစ်နာတာကို လူတိုင်း သတိပြုသင့်တယ်။
ဈေးတွေ ပတ်လောင်နေတာရယ်၊ဈေးသစ်ဆောက်ဖို့ သဘောမတူတိုင်းလောင်တာတွေတူနေတာရယ်
ဆိုတော့. အစိုးရ မရှို့ ဘယ်ကောင်လုပ်သလဲဗျာ။သနားစရာပြည်သူတွေ ဘဝပါလားကွယ်ရို့ ။သံတွဲဈေး
မီးမရဘူး မီးမလာဘူး အော်နေတာလေ …….. ညဘက်မှာ မီးတွေအများကြီးရအောင် ပေးတော့လည်း လူဒွေကပြောကြပြန်တယ် …….
ဈေးတွေမီးလောင်ရင် ညဘက်ပဲလောင်တယ်နော် အရမ်းကိုသိသာတာပဲ ……… သိနေဒယ် သိနေဒယ် ….. တဲပေါ်ကနေ တိုက်ပေါ်ကိုရောက်စေချင်နေတဲ့ စေတနာတွေလေ ……..
ဂွဈေးကိုအဆင့်မြင့်ဈေးဆောက်မယ်လို့ ကြားကတဲက စိတ်ပူနေတာ။ အခုပူတဲ့အတိုင်းဖြစ် လာ တော့စိတ်တောင်မကောင်းပါဘူးရှင်။ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
လှည်းတန်းဈေး ၊ တာမွေဈေး (ယာယီ) များ သတိထားကြကုန်လော. ။
ဩော်…အနိစ္စ…အနိစ္စ…အနိစ္စ လောင်လိုက်ရင်လဲ ဈေးသစ်ဆောက်မယ့်ဈေးတွေပဲ…မီး က ကြိုပီးသိနေသလားတောင်ထင်ရတယ်…။
စိတ်မကောင်းတာကတော့ …ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ နံမည်တတ်ခံရမဲ့ ဆိုင်ရှင်ကိုသနားမိပါတယ်။
အောင်သိန်းလင်း သားက အဲဒီဈေးကို ဆောက်ခွင့်ရထားတာ ကြာပြီလို့ပြောတယ်။
အခုတော့ ဒင်းက ဝမ်းသာမှာပေါ့။ ဒင်းလက်ချက်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
အဖြေမှန် ကို တိုတိုတုတ်တုတ် နဲ့ ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးကျေးပါ
ဈေးတစ်ခုတစ်လေ လောင်တာမျိုးဆိုရင် မပြောလိုပါဘူး။
အခုအများဆုံးတွေ့ နေတာက အသစ်ဆောက်ဖို့ ညှိနေတဲ့ဈေးဆိုရင် လောင်တာပဲ။
နောက်တစ်ခါဆို တာမွေဈေးပဲဆိုတာ ကြောင့် တာမွေဈေးကလူတွေအထူးသတိထားနေတာတွေ့ ကြားသိရပါတယ်။
တခြား ဈေးတွေလည်း အသစ်ဆောက်ဖို့ ညှိပြီဆိုရင် ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ သတိရှိကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတာလေး သတိရတယ်…။ သမ၀ါယမ ဆိုင်နားမနေနဲ့တဲ့…။ ခုလည်း ဈေးနားတော့ မနေရဲပေါင်……….